Warm Bodies (2013) – Channel Myanmar
PG-13 2013 98 min Drama, Horror, Mystery
IMDB: 6.9/10 208,237 votes
IMDb (6.9) / Rotten Tomatoes (81%)
Vampire တစ်ကောင်ကိုချစ်နိုင်ပေမယ့် Zombieဆိုရင်ရော ချစ်နိုင်ပါ့မလား?
အခုက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အလှည့်ပါ။ လူ့ဦးနှောက်တွေစားတဲ့ Zombieတစ်ကောင်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ့။ Zombieတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Rဟာ သူရဲ့တစ်နေ့တာကို စွန့်ပစ်ခံမြို့က လေဆိပ်ပျက်ထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရင် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။
သူ့မှာ Mဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတဲ့ သူ့ဘဝထဲကို ဝင်လာတဲ့သူက Julie
Julieနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတစ်စု Rတို့နေတဲ့ မြို့ပျက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ယူဖို့ အထက်ကအမိန့်ပေးခံရတယ်။
Julieတို့လည်း အဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုက ဆေးဝါးတွေကို သယ်နေတုန်း Rတို့ Zombieအုပ်စုနဲ့တိုးတဲ့အခါ……. Zombieဖြစ်နေတဲ့ Rဟာ Julieရဲ့ချစ်သူကို သတ်ပစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို စားလိုက်တယ်။
ဒီနေရာမှာ လှည့်ကွက်တစ်ခုက သေသူရဲ့ ဦးနှောက်ကိုစားလိုက်တဲ့အခါ သေသူရဲ့မှတ်ဥာဏ်တွေကို zombieက ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာ။
Julieချစ်သူ့ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကတစ်ဆင့် Rဟာ Julieအပေါ် ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခု ခံစားလိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ zombieတွေ လက်ထဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Julieကို Rတစ်ယောက် ကယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။
သူနေထိုင်တဲ့ လေယာဉ်ပျက်ထဲကို Julieကို ခေါ်သွားတဲ့အခါ…..
Rကို အရမ်းကြောက်နေတဲ့ Julie zombieတွေလက်ထဲ အသက်ရှင်နိုင်ပါ့မလား?
Rကရော zombieတစ်ကောင်းအဖြစ်ပဲ ဆက်ရှိနေမှာလား?
Julieကရော zombieတစ်ကောင်ကို ချစ်မိပါ့မလား?
ဒါတွေကို သိချင်ရင်တော့ Warm bodiesဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုသာ ကြည့်လိုက်တော့နော်။
“Cold Body Warm Heart”
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို ForHerMyanmar မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
File size…(1.6 GB) and (900 MB)
Quality….Blu-Ray 1080p 5.1 CH & 720p
Option 1 drive.google.com 1.6 GB 1080p BluRay 5.1
Option2megaup.net 1.6 GB 1080p BluRay 5.1
Option3Soliddrive.co 1.6 GB 1080p BluRay 5.1
Option4mirrorace.com 1.6 GB 1080p BluRay 5.1
Option5drive.google.com 900 MB 720p BluRay
Option6openload.co 900 MB 720p BluRay
Option7megaup.net 900 MB 720p BluRay
Option 8 Soliddrive.co 900 MB 720p BluRay
Option9mirrorace.com 900 MB 720p BluRay
[18+]Lost Flower: Eo Woo-dong (2015) 2015
Mother 2009 2009
City of Lies(2018) 2018
Lucy in the Sky (2019) 2019
Cube Zero ( 2004 ) 2004
Raid (2018) 2018
The Witch in the Window (2018) 2018
The Juror (2019) 2019
Liar Game 2: Reborn (2012) 2012
Imaginary Cat (2015) Complete 2015
Boy Erased(2018) 2018